Semalt Inotsanangura Chikonzero Nei Uchifanira Kugadzirisa Mavhidhiyo SeOO
6ES7647-3AA00-0AX0 SIEMENS.jpg" border="0" width="100%" style="margin-bottom:35px; margin-top:10px" align="absmiddle">
Mifananidzo yekugadzirisa inokosha chikamu chese-sitesarudzo, saka iwe unofanirwa kutora mufananidzo SEO kugadzirisa zvakanyanya, kunyanya kana zvisikwa zvinoonekwa ndizvo zvinonyanya kukosha pakushambadzira kwako.Ichi ndicho chikonzero vavaki vewebhu webhusaiti seShokoPress vanopa mifananidzo yekufambisa mifananidzo yakafanana sechikamu chekushanda kwavo pa-site.
Image optimization inofanira kufukidza zvifananidzo pawebsite yakokusanganisira musoro, inoratidza mifananidzo nemifananidzo yakaiswa. Mutengesi Kubudirira Muteja we Semalt , Igor Gamanenko anotsanangura nei sei mufananidzoKugadziriswa kwakakosha pakuita kwako.
Paunowedzera mifananidzo yako nekufambisa kwakakodzerauye kupupurirana, vacharatidza kufanana kwechifananidzo chakafanana mune injini yekutsvaga. Kana mifananidzo yako yakanyorwa pane Google imagestsvaga, iwe uchawana mamwe magwagwa uye uvandudze kuonekwa kwechikwata chako. Paunenge wanyatsogadzira mifananidzo yako yose uye unogadzira unhu hwakanakazvakagadzikana, iwe uchaona kukosha kukuru kwemugwagwa.
Site Speed ​​
Kana iwe ukakonzera mifananidzo yakareba-yepamusoro pawebsite yako,iyo inononoka uye vashandisi vachazofanira kumirira kuti vasvike kune zvinyorwa zvepa site yako. Low site speed rinoreva kushandiswa kwakaipa kwemushandisi wakovashanyi kunyanya kana shanduro yevashandi iri kutora mafaira ekufananidzira.
Mufananidzo unobata zvinhu zvinowanzoitika kunyange kana dambudzikohaina chokuita neeshandi yako. Mamiriro ezvinhu akadaro, muenzi wepaiti achaverenga nyaya yacho, asi haazooni chero mifananidzo, zvimwe zvisiri pachenanzvimbo dzinoshandiswa nemifananidzo iyo. Paunowedzera mapikicha ako nekuwedzera alt text kwavari, nzvimbo yako yevashanyi haigoni kuona iyomifananidzo asi unogona kuverenga kuti chithunzi chacho chinomirirei mushure mokunge mufananidzo unotakura dambudziko.
Nzira yekugadzirisa sei mazamu eSeji yako
Kufuridzirwa kwezvifananidzo kunovandudza kutakurayewebsite yako. Tichifunga kuti vazhinji vevashanyi vako vanowana nzvimbo yako pane zvigadzirwa zvemagetsi, hazvidikanwi kutakura zvakasarudzwamifananidzo ine uremu hwe megabytes. Unofanira kutema hukuru hwemifananidzo yako uchichengetedza hutano hwakanaka. Uyewo, faira mapikicha akonokuda kwewebhu iwe.e. PNG, GIF neJPG. Iwe unogonawo kubvisa metadata yemifananidzo yako kuti ucheke huwandu huri nani.
Paunoshandisa mafirimi asina kubviswa kubva pawebhu kana mukutora mifananidzo,iwe unofanirwa kuchinja mazita ekuremekedza akabatanidzwa kwavari akadai semanhamba uye netsamba yakareba, achivapa tsanangudzo yakajeka yakajekapane zvavanomirira. Iwe unogonawo kusanganisira mamwe mazwi anowirirana nebhizimisi rako kana achienderana nezvino mufananidzo.
Nguva dzose inosanganisira mabhii ekuti anotsanangura chiimumufananidzo. Semuenzaniso, sanganisira mazwi akadai se "mukadzi", "kudya" kana iri mufananidzo wemukadzi anodya chibereko.
Iyo inozivikanwawo se "alt description", iyo chinyorwa ndeyechii chinoratidzika apo chithunzi hachikwanisi. Inotsanangurawo chifananidzo cheGoogle yekutsvaga index. Iyi nzira inokubvumira kurondedzera iyomufananidzo mumutauro umwe.
Strategic kuenzanidza mifananidzo yako nedzimwe dzoseizvo zviri nani zviri nani pane kuzviisa pakati pe ndima.
Image optimization inogona kunge isingasviki kumusoro kwakozvinhu zvinokosha asi iwe unofanirwa kuzviita nekuda kwezvakataurwa uye zvinotora maminetsi mashomanana kuti uite.